पहिलोपटक देखियो कुलमानको फरक रुप : जनताको माग हो भन्दै बिजुली उत्पादन गर्न रोक लगाउन आउने यी ब्याक्तिलाई कुलमान घिसिङ्गले झन्डै कुटेनन् (भिडियोसहित) - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /विचार/पहिलोपटक देखियो कुलमानको फरक रुप : जनताको माग हो भन्दै बिजुली उत्पादन गर्न रोक लगाउन आउने यी ब्याक्तिलाई कुलमान घिसिङ्गले झन्डै कुटेनन् (भिडियोसहित)
भट्टराईले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर, जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । कुलमानले भने, ‘तपाईको माग भन्नुस् न, जनताको होइन । जनताको माग समाधान गर्छौं हामी ।’ भट्टराई आफैं रसुवातर्फको पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् । उनले जनताको नाम लिँदै नाजायज मागहरु राख्ने गरेको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । बिहीबार पनि उनले जनताको माग भन्दै थप माग तेस्र्याएका थिए ।आयोजनाका कर्मचारीहरुले यहाँ एक दिन काम रोकिँदा करोडौं क्षति हुने बताए । त्यसमा थप्दै कुलमान कडि्कए, ‘एक दिन कसैले रोक्यो भने :
तपाईंलाई समातेर थुनिदिन्छु ।’ अनलाइन खबर बाट
प्रनेश फेरी प्रहरीकाे हिरासतमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘गोल्ड मेडल’ नै किनबेच !!
म झण्डा हल्लाउन मन्त्री भएको होइन, मलाई परिणाम चाहिन्छ : मन्त्री पुन
नेपाल र नेपालीको लागि आफ्नो ज्यान खुकुरिको धारमा राखे रबि लामिछानेले अब जनताले राख्ने कि नराख्ने? यी चेलीको आवाजले एक पटक रुवाउने छ !! हेर्नुहोस भिडियो